နိုင်ငံတော်အစိုးရ..နဲ့..သဘောင်္သားအသစ်..များ..စဉ်းစားကြည့်ဘို့.. ~ MSU Portal
9/02/2013 06:26:00 AM Hpyae No comments
ဆေးတက္ကသိုလ်..လာတက်ဘို့..နိုင်ငံတော်က..အိမ်လာ..မခေါ်ပါဘူး..။ ကိုယ်ဝါသနာပါလို့..တက်ချင်လို့..အမှတ်မီလို့..အကုန်ကျခံပြီး..နှစ်များစွာတက်လာခဲ့တာပါ..။ အဲဒီလို..၆နှစ်ကျော်တက်ပြီး..သိန်းပေါင်းရာချီ..ကုန်ခဲ့ပေမဲ့..။ ။။။။။။။။။။ ဆရာဝန်..ဘွဲရတဲ့..လူတိုင်းကို..နိုင်ငံတော်..အစိုးရက..ပြည်တွင်းမှာ..အလုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး..။ ။။။။။။။။။ ဒါပေမဲ့..ဆရာဝန်တွေ..၊ သူ့မိသားစုတွေက..ဒီကိစ္စကို..အမြဲအော်ဟစ်မနေပါဘူး.. ။။။။။။။။။။ အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်တွေ..လာတက်ဘို့..နိုင်ငံတော်က..အိမ်လာပြီး..အတင်းအဓမ္မ..မတက်ခိုင်းပါဘူး..။ ကိုယ်ဝါသနာပါလို့..တက်ချင်လို့..အမှတ်မီလို့..အကုန်ကျခံပြီး..နှစ်များစွာတက်လာ ခဲ့ကြတာပါ..။ အဲဒီလို ၆နှစ်တက်ပြီး..သိန်းပေါင်းရာချီ..ကုန်ခဲ့ပေမဲ့ ။။။။။။။။။ အင်ဂျင်နီယာ..ဘွဲ့ရတဲ့..လူတိုင်းကို..နိုင်ငံတော်..အစိုးရက..ပြည်တွင်းမှာ.. အလုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး..။ ။။။။။။။။။ အင်ဂျင်နီယာဘွဲ့ရတွေနဲ့..၊ သူ့မိသားစုတွေက..ဒီကိစ္စကို..သြော်ဘွဲ့ရသူတိုင်း..အလုပ်မရနိုင်ဘူးလို့..နှလုံးသွင်းထားပြီး..သား..ဖြစ်လေသလားမသိ..တောင်းဆိုသံ..သိပ်မကြားရပါဘူး..။ ။။။။။။။။။။ စီဒီစီ..လျှောက်ဘို့..နိုင်ငံတော်က..အိမ်ကို...လာ..မခေါ်ပါဘူး..။ မယူမနေရ..လျှောက်ခိုင်းတာ..မဟုတ်ပါဘူး..။ ကိုယ့်ဘ၀..ရှေ့ရေးအတွက်..ကောင်းမယ်ထင်လို့..ကိုယ်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ..။ စီဒီစီ..ရဘို့.က..လပိုင်းဘဲ..ကြာပါတယ်..။ သိန်း..ခုဂဏန်းဘဲ..ကုန်ပါတယ်..။ ။။။။။။။။။ စီဒီစီ..ရှိသူတိုင်းကို..နိုင်ငံတော်က..ပြည်တွင်းမှာ..အလုပ်မပေးနိုင်ပါဘူး..။ ပြည်ပမှာ..ရှိတဲ့..သဘောင်္ပိုင်ရှင်တွေကို..ငါ့တိုင်းပြည်ကလူတွေ..သုံးပါလို့.. အမိန့်သွားပေးလို့..မရပါဘူး..။ ။။။။။။။။။။။။။။ မြန်မာပြည်..SECD က..အရာရှိကြီးတစ်ယောက်က..နော်ဝေနိုင်ငံက..သဘောင်္ပိုင်ရှင်ကို..မင်းတို့..ငါ့လူမျိုးသဘောင်္သားတွေ..ခန့်ပါလို့..အမိန့်ပေးလို့..ရနိုင်..မရနိုင်..စဉ်းစားပါ..။ ဖိလစ်ပိုင်တွေထက်..မြန်မာတွေက..သာရင်..နော်ဝေ..က..ခေါ်မှာပေါ့..။ အရည်အချင်းတူနေရင်တောင်..သုံးလက်စ..လူကို..သုံးမှာပေါ့..။ ညံ့နေလို့ကတော့..လှည့်တောင်..မကြည့်တော့ဘူး..။ ။။။။။။။။။။ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက.. ပညာရေးနဲ့..အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းကို..တွဲပြီး..စဉ်းစားရမှာ..မူဝါဒချရမှာ.. နိုင်ငံတော်..အစိုးရတာဝန်ပါ..။ တစ်နှစ်ကို..ဘယ်ဘွဲ့နဲ့..ဘွဲ့ရဘယ်လောက်ထွက်လာမယ်..။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းက..ဘယ်လို့ဆိုတာကို..နှစ်ရှည်မျှော်တွေးပြီး..စီမံချက်ချ..လုပ်ဆောင်ရမှာ..နိုင်ငံတော်..အစိုးရတာဝန်ပါ..။ နိုင်ငံတော်..အဆင့်က..လုပ်မှလည်း..ရမှာပါ..။ ။။။။။။။။။။။ နောက်တစ်ချက်က..Professional Field တစ်ခုကို..ရွေးချယ်ဘို့..စဉ်းစားတဲ့..အခါတိုင်း.. အဲဒီ..Field မှာ..ဘွဲ့ရဘို့..လက်မှတ် အဆင့်တစ်ခုကို..ရဘို့....ဘယ်လောက်နှစ်ကြာမယ်..။ ငွေဘယ်လောက်..ကုန်နိုင်တယ်..။ အလုပ်အကိုင်..အခွင့်အလန်း..များတယ်..။ သို့မဟုတ်..နည်းတယ်..။ ဆိုတာကို.. တင်ကြိုလေ့လာသင့်တာကလည်း..ကာယကံရှင်များဘက်က..လုပ်ရမဲ့.ဟာပါ..။ ။။။။။။။။။။။ သဘောင်္သား..အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းဟာ..လွန်ခဲ့တဲ့..နှစ်(၃၀)လောက်ကလည်း.ဒီလိုပါဘဲ..။ လူတိုင်းအလုပ်မရတာ..။ ရှာရတာ..။ ရိုက်ကြေးပေးရတာ..။ ရှိခဲ့သလို..။ အခုလည်း..ရှိနေ..နောင်လည်းရှိနေမှာပါ..။ ။။။။။။။။။။။ ရိုက်ကြေးဆိုတာက..Supply and Demand ကွာဟ..မှုက..ပေါ်ပေါက်လာတာပါ..။ ။။။။။။။။။။။ နိုင်ငံခြား..ကုမ္ပဏီတွေက..မြန်မာသဘောင်္သားတွေကို..Demand များလာဘို့က..မြန်မာသဘောင်္သားများ..ကိုယ်တိုင်က..လုပ်ရပါ့မယ်..။ English ကောင်းတာ..။ အလုပ်ကြိုးစားတာ..။ အလုပ်ကျွမ်းကျင်တာ..တွေ..က..Demand ကို..များစေမှာပါ..။ ဒါပေမဲ့..ခုရေတွင်းတူး..ခုရေကြည်သောက်ချင်လို့တော့..မရပါဘူး..။ နှစ်နဲ့ချီစောင့်ရပါ့မယ်..။ စီနီယာများရဲ့..ကြိုးစားမှုက..ဂျူနီယာများ..အတွက်..အလုပ်အကိုင်ကို..ပေါစေမှာပါ..။ စီနီယာတွေ..ရဲ့..ပေါ့လျော့မှု..က..ဂျူနီယာများ..အတွက်..အလုပ်အကိုင်..ရှားစေမှာပါ..။ ဒီတော့..Exam:မှာ.Training မှာ..Quality လျော့သင့််မသင့်..စဉ်းစားကြပါ..။ ။။။။။။။။။။။ နိုင်ငံတော်အစိုးရ..အဆင့်.ကလည်း..ရေကြောင်းလောကမှာ..Quality တက်လာအောင်. .စေတနာထား..လုပ်ပေးဘို့..လိုပါတယ်..။ ။။။။။။။။။။။။ နိုင်ငံတော်ပိုင်ကျောင်းတွေမှာ.ဆရာမပြည့်စုံတာကို..ပြည့်စုံအောင်..စီစဉ်ပေးဘို့..လိုအပ်ပါတယ်..။ နိုင်ငံတော်ပိုင်ကျောင်းတွေမှာ..ဆရာစုံတယ်..။ များတယ်..။ ဆိုရင်..တန်းခွဲအများကြီး..ဖွင့်နိုင်ပါတယ်..။ နိုင်ငံတော်က..မြေ..အဆောက်အဦး..သင်ထောက်ကူ..လျှပ်စစ်မီတာခ..၊ အထောက်အကူပြုဝန်ထမ်းလစာ..၊ တွေပါ..ထောက်ပံ့ထားတဲ့..အတွက်.. သင်တန်းကြေးလျှော့ယူနိုင်ပါတယ်..။ ပုဂ္ဂလိက..မှာက..အစောကလို့..ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေမရှိတော့..သင်တန်းကြေးမြင့်နေပါတယ်..။ နိုင်ငံတော်ကသာ..တာဝန်ယူပြီး..စီစဉ်နိုင်ရင်..၊ ရေရှည်မှာ..ပုဂ္ဂလိကသင်တန်းတွေဟာ..နိုင်ငံတော်ကျောင်းများကို..မယှဉ်နိုင်ဘဲ..ပိတ်သွားရမှာပါ..။ အဲဒီလို့..မပိတ်ခင်စပ်ကြားမှာ.. ပုဂ္ဂလိက.သင်တန်းကျောင်းတွေ ရဲ့..Quality ကိုလည်း.ထိန်းချုပ်ထား..ရပါ့မယ်..။ ။။။။။။။။။။။။။ နောက်..အရေးတစ်ကြီး..ကိစ္စ..က ကျောင်းဆရာဘက်မှာကော..စာမေးပွဲစစ်ဆေးရေးမှာကော..နောင်..၅နှစ်နဲ့. .ရနှစ်စ်ကြားမှာ..မျိုးဆက်ပြတ်တော့မှာ..ကို..နိုင်ငံတော်..အစိုးရဘက်က..တစ်ခုခု..စဉ်းစားဘို့..လိုနေယုံမက..အရေးယူဆောင်ရွက်ဘို့ကို..လိုနေပါတယ်..။ Training နဲ့..Exam မှာ..Human Resources ..နည်းနေပါ..။ နည်းလာ..နေပါတယ်..။ ခါးဆက်ပြတ်နေပါတယ်..။ အချိန်မီ..မစီစဉ်ရင်...မျိုးပါ..ပြတ်ပါတော့မယ်..။ ။။။။။။။။။။။။။ွှကျောင်းဘက်မှာကလည်း..နှစ်ယောက်နဲ့တစ်ပိုင်း စာမေးပွဲဘက်မှာ..လည်း..ဖင်မနိုင်ဘဲ..ပဲကြီးဟင်း..သောက်ရသလို..ဖြစ်နေတာ..ကြာပါပြီ..။ ဥပမာပြောရရင်..ပြီးခဲ့တဲ့..3E Exam မှာ..Oral ကို..လူ(၄၀၀) စစ်ရပါတယ်..။ တစ်နေ့ကို..အယောက်(၂၀) စစ်ရင်..ရက်(၂၀)ကြာပါတယ်..။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေပါ..ထည့်လိုက်ရင်..တစ်လကြာပါတယ်..။ စာစစ်မဲ့ဆရာတွေက..မနက် ၈း၃၀ ကနေ..တစ်ခါတစ်လေ..ညနေ ၆း၃၀ ထိစစ်ရပါတယ်..။ ကျောင်းသားက..ညံ့လို့..နမိတ်ပြမေးခွန်းတွေနဲ့..ခေါ်မေး..မေးနေရရင်..တရက်ကို..၁၅ ယောက်တောင်..အနိုင်နိုင်..။ ။။။။။။။။။။။။။ သဘောင်္သားတွေဘက်က..စာမေးပွဲတွေ..မှန်မှန်ကျင်းပပေးဘို့..တောင်းဆိုပါတယ်..။ မှန်ပါတယ်..။ DMA ဘက်မှာ..ဘာပြဿနာတွေရှိနေလည်း..လို့တော့..ဘယ်သူမှ..မေးလေ့မရှိပါဘူး..။ ။။။။။။။။။။။။။ ပြောစရာတွေက..အများကြီးပါ..။ ။။။။။။။။။။။။။ မှန်တာပြောတော့..လူမုန်းများမှာသိပါတယ်.။ ဒါပေမဲ့..ကိုယ့်..Professional တိုးတက်လိုတဲ့..စိတ်နဲ့..ပြောတာမို့..အမှားပါရင်..ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ..။ ။။။။။။။။။။။။။ ၀င်းအောင် ရေကြောင်း..ကျောင်းဆရာ..